कृत्रिम स्वीटनरको स्वास्थ्य जोखिम | बेजिया
टोय टोरेस | 10/05/2022 20:00 | पोषण
पक्कै पनि एक भन्दा बढी अवसरहरूमा तपाईंले सुन्नु भएको छ कि कृत्रिम मिठाईहरू स्वस्थ छैनन्। किनभने लामो समयदेखि चर्चा चलिरहेको छ यी स्वास्थ्य उत्पादनहरु को नकारात्मक प्रभाव। तर, स्याकरिन चिनीभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने आधारमा यो सामान्य उत्पादनको बेफाइदालाई ध्यानमा नराखी यसको सेवन गरिँदै आएको छ ।
यस समयमा जब खानाको धेरै ख्याल राखिएको छ, जसमा धेरै भन्दा धेरै मानिसहरूले सबैभन्दा हानिकारकहरूलाई खारेज गर्न उत्पादन लेबलहरू पढ्न र बुझाउन सिक्छन्, किन नजान्ने र पदार्थहरूको खतराहरू बारे थप पत्ता लगाउने जुन प्राथमिकतामा पर्न सक्छ। हानिरहित? यदि तपाईं कफी पिउनेहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ र मिठाईहरूसँग इन्फ्युसनहरू पिउनुहुन्छ, हामी तपाईंलाई यसको खपतको स्वास्थ्य जोखिमहरू पत्ता लगाउन आमन्त्रित गर्दछौं।
1 के मिठाई स्वास्थ्यको लागि खतरनाक छ?
1.1 कसरी स्वस्थ तरिकामा चिनी प्रतिस्थापन गर्ने
के मिठाई स्वास्थ्यको लागि खतरनाक छ?
गरिएको अध्ययन अनुसार, कृत्रिम मिठाई को निरन्तर खपत हाम्रो शरीरमा हुने स्वस्थ आन्द्राको ब्याक्टेरियालाई हानी पुर्याउन सक्छ। यी ब्याक्टेरियाहरू आन्द्राको माइक्रोबायोटाको भाग हुन् र शरीरको काममा भूमिका खेल्छन्। जब कुनै चीजले तिनीहरूलाई बाधा पुर्‍याउँछ, स्वस्थ ब्याक्टेरियाहरू बिरामी हुन सक्छन् र स्वास्थ्यको लागि खतरनाक हुन सक्छन्।
यो के हो कृत्रिम मिठाई को खपत मा अध्ययन निर्धारण गर्दछ। विशेष रूपमा, तिनीहरूले दुई प्रकारका आन्द्रा ब्याक्टेरिया, ई-कोलाई र ई-फेकलिसलाई परिवर्तन गर्न सक्छन्। स्पष्ट रूपमा केहि कृत्रिम मिठाई को घटक उक्त ब्याक्टेरियाको मात्रा परिवर्तन गर्न वा अर्को प्रकारको उत्पादन गर्न सक्छ जसले आन्द्राको माइक्रोबायोटाको प्राकृतिक संरचनालाई परिवर्तन गर्न सक्छ।
नतिजाको रूपमा, यी ब्याक्टेरियाले आन्द्राको पर्खाललाई क्षति पुर्‍याउन सक्छ, यसबाट पार गरेर रगतमा पुग्न सक्छ। यी रोगग्रस्त ब्याक्टेरियाहरू बस्न र जम्मा गर्न सक्छन् जस्तै क्षेत्रहरूमा लिम्फ नोड्स, प्लीहा वा कलेजो र परिणाम धेरै खतरनाक हुन सक्छ। अन्य समस्याहरू मध्ये, सबै प्रकारका संक्रमणहरू हुन सक्छ, सबैभन्दा खतरनाक, सेप्टिसिमिया सहित।
कसरी स्वस्थ तरिकामा चिनी प्रतिस्थापन गर्ने
जब तपाइँ कृत्रिम स्वीटनर प्रयोग गर्नुहुन्छ, यो किनभने तपाइँ तपाइँको चिनीको सेवन कम गर्न चाहानुहुन्छ। या त स्लिमिङ आहारको भागको रूपमा वा खानेको स्वस्थ तरिकाको रूपमा। तिनीहरू पहिले नै परिचित छन् चिनीको खतरा र यसको लततर बिस्तारै बिस्तारै सुरु हुन्छ मिठाई जस्ता कृत्रिम उत्पादनहरूको जोखिम पत्ता लगाउनुहोस्। त्यसकारण, स्वास्थ्यको लागि खतरनाक नहुने उत्पादनहरूसँग खानालाई मीठो बनाउने अन्य तरिकाहरू खोज्नु राम्रो हुन्छ।
प्राकृतिक स्वीटनरको उदाहरण मिति हो। प्राकृतिक चिनीको ठूलो मात्रा भएको फल जुन चिनी प्रयोग नगरी घरेलु मिठाईहरू र मिठाईहरूलाई मीठो बनाउनको लागि उपयुक्त हुन्छ। मितिहरूको कमजोरी भनेको तिनीहरूको उच्च चिनी सामग्रीले तिनीहरूलाई धेरै क्यालोरी खाना बनाउँछ। तसर्थ यदि तपाई तौल घटाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले यिनको सेवन कम मात्रामा गर्नुपर्छ ।
कफी वा इन्फ्युसनलाई मीठो बनाउन, तपाईंले मह वा एगेभ सिरप जस्ता उत्कृष्ट प्राकृतिक मिठाईहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि तिनीहरू पनि एकदम क्यालोरी छन्, जस्तै धेरै सानो मात्रा मीठो बनाउन पर्याप्त छ एक गिलास धेरै समस्या हुनुहुँदैन, जबसम्म तपाईं खपत मा बढ्छ। कृत्रिम मिठाईहरूको लागि, तिनीहरू सबै समान रूपमा खतरनाक छैनन्।
सबै भन्दा राम्रो विकल्पहरू बीच स्टेभिया हो जुन बिरुवाबाट आउँछ, त्यसैले यो प्राकृतिक हो, वा एरिथ्रिटोल। यो प्राकृतिक मिठाई धेरै खानाहरू जस्तै मकै वा च्याउ, अरूहरू बीचबाट आउँछ। कुनै पनि अवस्थामा, स्वास्थ्यको लागि हानिकारक रासायनिक यौगिकहरूबाट बच्नको लागि सधैं प्राकृतिक स्वीटनर छनौट गर्नु उत्तम विकल्प हो।
अन्तमा, याद गर्नुहोस् कि चिनी खानाको स्वाद छल्न प्रयोग गरिने एक अवयव बाहेक अरू केही होइन। उत्पादनहरूको प्राकृतिक स्वादको आनन्द लिन सिक्नुहोस् जुन प्रायः ठूलो मात्रामा चिनी र बीचमा लुकेको हुन्छ तपाईले पत्ता लगाउनुहुनेछ कि तपाईको तालु बिस्तारै बानी पर्दैछ उनीहरु। चाँडै तपाईले धेरै स्वादको आनन्द लिनुहुनेछ र यसको साथ तपाई स्वस्थ खाना खान सक्षम हुनुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » स्वास्थ्य » पोषण » कृत्रिम मिठाईको स्वास्थ्य जोखिम
बुल्गेरियन स्क्वाट्स र तिनीहरूका फाइदाहरू